Raad Raac News Online – Hal-Abuure Jamac Awil Jamac oo Qoray Maqaal dheer oo ku saabsan Furaha Nolosha?
Shiddo ma leh Da’da aad jirto, Meesha aad ku nooshahay iyo weliba sida aad u nooshahay, waxaa jira hal shey oo aynu ka mideysanahay dhammaanteen kaas oo ah – In aynu go’aansano gaaridda nolol guul inoo horseedda.
Uumanahan giraanta dunidan ku dul nooli, wuu ku kala duwan yahay qeexitaanka guul ka gaaridda nolosha, qofba wuxuu u muuqdaa in uu raaco wado uu aaminsanyahay in ay guul nololeed u horseedi karto, weyna dhacdaa in wadadaas noqoto mid lagu najaxo ama cashar laga barto.
Sida bini’aadkaba kuwada jirta, ruux kasta wuxuu doonayaa in uu nolasha ka miro dhaliyo kuna noolaado nolol kifaax leh uuna ku qanci karo isaga oo u mara wadiiqo kasta uu is leeyahay waxay ku gaarsiin kartaa nolol guul iyo farxadi ku dheehan tahay, kana fogaanaya waxkasta oo uu is oran karo waxay ku dhan-dhansiin kartaa culeyska, murugada iyo dhibaatooyinka ragaadiya guul ka gaaridda Nolosha.
Himiladaas uu qofkast higsanayo iyada oo ay jirto, haddana dadku mawada helaan libinta iyo guusha Nolosha, dad badan oo dadaal iyo go’aan qaadashaba sameeyey ayeysan u hirgalin gaaridda yoolkii ahaa Nolol quman oo qaneeco leh. Qorshe kasta oo dhigan iyo dadaal kasta oo firfircooni, uma qabsoobaan sidii loo qorsheeyey iyagoon marin hadimooyin iyo qodxo kasoo horreeya gaaridda hiigsiga qorshahaaga. Inta yar ee u dhabar adeygta caqabad kasta oo soo foodsaarta hammiga iyo qorshahooda waxaa u dhabowda himilo uu usoo hayaan tagay, rajo uu soo naawiley iyo guul uu soo qorsheystey.
Waxaa aadanuhu ku kala duwan yahay tabaha uu qofkastaaba u marayo sidii uu ugu guuleysan lahaa Nolosha, assiibana hadafka iyo yoolasha u degsan. Balse waxa jira tabooyin iyo tusaalayaal ina tusin karo wadiiqooyin raacidoodu inoo horseedi karto in aynu ku naaloonno nolol raxmad iyo naxariis laga dul dheehan karo.
Ka Fikir Nolosha.
Fikirku waa mid ka mid ah agabyada ay ku hawl gasho maskaxda bani aadamku. Waa hanti ma-guurto ah oo dadku dheer yahay noolaha intiisa badan si uu ugu qaabeeyo nolosha iyo waayaha uu hadba la nool yahay, waana hab dhaxalsiiya qofka tusmo, arag-fogaan iyo aqoon baahsan oo ku salaysan garasho san. Waa hal-beeg unka waxa qofku aaminsan yahay ee uurka ugu jira , ubuc iyo hoy’-na u ah yoolalka iyo himilooyinka uu higsanayio. Haddii aan fikir jirin, marnaba uma suurto gasheen noolaha in uu horumar gaaro una qaabeeyo nolosha hadba sida uu ka raalli yahay.
Waxkasta oo uu qofku isku dayo in uu wax qabsado ama guul ka gaaro waxa ay ku bilaabantaa fikir. Hab-dhaqankeenna iyo falkasta oo aan samaynayno iyo waxa aan qabaneyno waxa ay ka turjumeysaa marwalba afkaarteenna.
Qof kastaa waa hubaal in uu fikiro hase yeeshee waxa lagu kala duwan yahay mugga ama heerka uu joogo fikirka qofku, waxa uu ka fikirayo waxa uu yahay; xumaan ama samaan, hore-u-socosho ama dib-dhac, tognaan ama tabnaan, dhisid ama dumin.
Maskaxda oo ah barta hoyga u ah fikirku waa beer ay ka soo go’aan oo keli ah hadba wixii lagu abqaalo. Haddii aad ku ku beerto maanka, guul, horumar, kalgacal, waxa aad shaki la’aan ka goosanaysaa mirro wanagsan. Haddiise aad marwalba ka fikirto waxkasta oo taban- guul darro, dib-dhac, nacayb- waxa aaad ahaaneysaa mid nolosha ku guul dareystey. Fikirka togan waxa sees u ah kalsoonida nafta. Haddii aad ka fikirto marwalba guuldarro, waxa hubaal ah in aad la kulmi doonto guuldarro. Haddii aad guul ka fikirtana, waa hubaal in aad guul gaareyso.
Waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee uu qofka ibnu aadamka ahi haysto inta uu nool yahay, waana raasamaalka ugu faa’iidada badan haddii si wacan looga faa’iidaysto oo loo qorsheeyo, waana Miqyaas laga sargooyo Qiimaha Noloshaada- Qiimaha wakhtigaagu waa Qiimaha Noloshada.
Haddaba nolosha qiimaheedu waa waqtiga, dadkana waxay noloshoodu u kala qiimo badan tahay sida waqtigoodu u kala qiimo badan yahay. Waxa se is weyddiin leh waqtigu miyuu kala qiimo duwan yahay? Jawaabtu waa maya, waqtigu ma kala duwana waxa Noolaha oo dhammi ka siman yihiin waa hal waqti oo isku mid ah. Qof waliba isaga ayaa waqtigiisa qiimo gaar ah u yeela,waxa keli ah ee ka la duwayaa waa sida ay u kala qiimeeyaan una qorsheystaan.
Maalinkasta oo dunidan kusoo martaa waxay reebtaa am ka tagtaa dhacdooyin nolosha lagu mahadiyo ama tiiraanyo murug iyo ciil weydaarta. Shalay waa maalin ina dhaaftay, mana soo noqon doonto. Shalay wixii qofka soo maray waa hanti qiime leh oo ma-guurto ah, waayo-aragnimo iyo cashar ay tahay in uu wax ku qaato, si shalay iyo wixii qalloocmay iyo wixii uu kala kulmay dhib uu uga gaashaanto oo aanay markale dib ugu soo noqon timaaddada.
Rumee Awooddaada Guusha.
Qof walba waxa uu leeyahay hibooyin iyo karti isaga gaar u ah oo dadka kale kaga duwan yahay, kuna fuliyo ujeeddooyinka naftiisa, noloshiisa, iyo shakhsiyaddiiba. Hayeeshee muhiimadda ugu weyn ayaa waxa ay tahay in qofka uu daboolka ka feydo hibadda iyo kartida uu leeyahay ee ku dhex qarsoon naftiisa si uu ku helo kartida iyo awoodahah fulineed ee ku qarsoon sifo uu ugu faa’iideeyo naftiisa iyo bulsha ay ood-wadaagta yihiin.
Dhamaan dadka macnaha sameeyay ee kugu xeeran-sheekh iyo sharifba- midkasta wuxu gurtey miraha uu beertay, midkasta wuxu ku naaloonayaa inoo gaarey guulo uu habeenno usoo jeedey, maalmana usoo dhibtoodey, aakhirkiise dulqaad iyo Samir kusoo dhaafey.
Gabagabadii, Guusha Noloshu wa wax cayiman waa wax qofkasta yaqaan, waa wax cidii ku sifoowdaa ay dadka kaga tilmaamantahay astaamo gaara, loona xiisoodo raacida dariiqa ay mareen, hadana ma jirtjirto waddo kaliya oo guul kugu hagi karta.
Guushu maaha xoolo badan, maaha shaqo badan, mana aha mansab sare, balse guushu wa xasilooni Nafeed iyo daganaansho niyadeed, guushu waa waxa qofka u sahla inuu si niyad sami’ ah ugu dhex nooladoo bulshadiisa, waxa suura gala inaad wakhti badan ku bixiso waxad u aragto guul weyn, balse qofkale uu kuu arko qof raacdeysanaya daal iyo dhib.
Haddaba waxaa jirta awoodo markaasi u baahan in laga shaqeeysiiyo si qofku uu noqdo mid diyaar u ah inuu waajaho caqabadaha nolosha ka buuxa, waxaan kusoo bandhigi doonaa qormooyin kale Hadduu ALLE idmo.